Home Page}Undergraduate}Paying For College}CSSyes}CSSyes information | Somali
Haddii ubadkaaga uu kuliyad aado, isaga ama iyadu waxay kasban karaan $20,000 dheeraad ah sanadkiiba kaa soo ah mid ka badan ilmaha aanan kuliyada aadin.
Sida machad waxbarashada oo 100-sano jirsaday ee ku yaala Duluth, Minnesota, Kuliyadda St. Scholastica waxay gashay heerka ugu sareysa ee kuliyaddaha wadanka sida ay qortay US News & World Report.
Fasaladeena waa kuwa yar; macalimiinteena badankooda waxay haystaan shahaadooyin sar-sare ee takhasus laan cilmi; oo hadda macalin kasta waxaa ku soo aada 14 arday kaliya, wiilkaaga ama gabadhaada waa la hubaa in ay helayaan feejignaan shaqsi ee macalinkooda.
Waxaan ka dhashay qoys daqligooda-hooseeya oo waxaan bixiyaa in ka yar inta aan bixin la'haa kuliyaddaha dad weynaha. St. Scholastica waxay iga caawisay in ay ii tilmaanto deeqaha-waxbarasho ee ugu fiican oo ka dhigay mid la awoodi kara. Waxaan ka maqsuuday in aan ogaado in aan waxbarashada ugu wanaagsan aan ka heli doono kulyad iga caawisa inta aan ku sii jirro safarka waxbarashada.
Waaxda Gargaarka Maaliyadeed ee St. Scholastica waxay diyaar u yihiin oo ay doonayaan in iskuulka ay ka dhigaan mid ay heli karaan kuwa danaha dhabta ay ka hayso waxbarasho guud iyo abaal-marino lacageed oo sanad kasta ah iyo deeq-waxbarasho iyo gargaar. Tayada ugu sareysa ee adeeggyada ay bixio, dhigashada St. Scholastica waxay shaki la'aan ii ahayd maal-gelin la isku hubo.
Waan ku faraxsan nahay dalabkeyga ahaa ee aan ku imid kulyadda St. Scholastica maxaa yeeley qoyskayga iyo aniga waan isla garanay maal-gelinta halkan, waxaan wada dareennay waxa aan u meleyneyney in iskuulka dad weynaha ay ku kici doonto. Waaxyaha ogolaanshaha iyo deeqda-waxbarashada way inala qabteen wax kasta oo inaga caawiya hanaanka oo aan fahano in kulyadda St. Scholastica ay tahay mid la awoodi kara. U qalmitaan way ka badan tahay.